जोन्टि रोड्स भारतको फ़िल्डिङ्ग प्रशिक्षक बन्न सक्ने – WicketNepal
जोन्टि रोड्स भारतको फ़िल्डिङ्ग प्रशिक्षक बन्न सक्ने
Bipul Bhattrai, २०७६ श्रावण ८, बुधबार १७:३९
पूर्व दक्षिण अफ्रिकी क्रिकेटर तथा महान् फ़िल्डर जोन्टी रोड्सले भारतीय क्रिकेट टोलीको फ़िल्डिङ्ग प्रशिक्षकका लागि आवेदन दिएको खबर बाहिरिएको छ।
केहि साता अघि इंग्ल्याण्डमा सम्पन्न एक दिवसिय विश्वकपमा भारतले सेमिफाइनलमा न्युजिल्याण्ड बिरुद्ध हार बेहोरेपछि भारतिय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड ( बिसिसिआई ) ले टोलीका सबै प्रशिक्षक परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको थियो। मुख्य प्रशिक्षक सहित ब्याटिंग, बलिङ्ग र फ़िल्डिङ्ग प्रशिक्षक संगै फिजियोथेरापिस्ट, ट्रेनर र व्यवस्थापकीय अधिकृतमा बोर्डले नयाँ अनुहार भित्राउने भन्दै इच्छुक प्रशिक्षकहरुलाई आवेदन दिन समेत आग्रह गरेको थियो।
Jonty Rhodes has reportedly applied to be #TeamIndia‘s fielding coach.https://t.co/yqVa1PewFO
— Circle of Cricket (@circleofcricket) July 24, 2019
सोहि अनुरुप जोन्टी रोड्सले फ़िल्डिङ्ग प्रशिक्षकका लागि आफ्नो नाम पेश गरेको खबर भारतीय मिडियामा फैलिएको हो। द सपोर्ट रस् , सर्कल अफ क्रिकेट सहित नाम चलेका अन्य केहि मिडियामा प्रकाशित समाचार अनुशार रोड्सले भारतको फ़िल्डिङ्ग प्रशिक्षकका रुपमा काम गर्ने सम्भावना ठूलो रहेको छ।
यसअघि भारतको फ़िल्डिङ्ग प्रशिक्षकका रुपमा आर श्रीधरले काम गर्दै आएका छन्। यस्तै मुख्य प्रशिक्षक रभी शास्त्री, बलिङ्ग प्रशिक्षक भरत अरुण र ब्याटिंग प्रशिक्षक संजय बांगरको स्थानमा समेत बिसिसिआईले नया आवेदनको लागि समय खुलाएको छ।
इन्डियन प्रिमियर लिग ( आइपिएल ) क्रिकेटमा रोहित शर्मा कप्तानीको मुम्बई इन्डियन्सको फ़िल्डिङ्ग प्रशिक्षक रहिसकेकाले समेत रोड्स भारतीय टोलीसंग जोडिन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ। सन् १९६९ मा जन्मिएका रोड्ससंग दक्षिण अफ्रिकाबाट ५२ टेस्ट, २४५ एक दिवसिय र १६४ प्रथम श्रेणी क्रिकेटको अनुभव रहेको छ। रोड्सले एक दिवसिय क्रिकेटमा १०५ , टेस्ट क्रिकेटमा ३४ र प्रथम श्रेणी क्रिकेटमा १२७ क्याच आफ्नो नाम गरेका छन्।
सन् १९९२ को विश्वकपमा पाकिस्तान बिरुद्धको खेलमा इन्जमाम् उल हकलाई हावामा छ्ल्लाङ्ग लगाउंदै रन आउट गरेपछि रोड्सको फ़िल्डिङ्गको चर्चा विश्वभर चुलिएको थियो। इन्जमाम् लाई रन आउट गर्दाको सो तस्विरलाई एक पत्रिकाले, ” के यो चरा हो ? के यो प्लेन हो ? हैन उनी जोन्टी रोड्स हुन् ” लेखेर प्रकाशित गरेपछि रोड्स फ़िल्डिङ्गको क्षेत्रमा थप चिनिएका थिए।
Pawan Sarraf , Jonty Rhodes
पछिल्लो बर्ष नोभेम्बरमा जोन्टी पहिलो पटक नेपाल समेत आएका थिए। नेपाली उमेर समुहका खेलाडी र एकेडेमी तहका खेलाडीहरुलाई प्रशिक्षणमा समय बिताएका रोड्सलाई तेस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग ( डिपिएल )मा सद्द्भावना दुत समेत बनाइएको थियो। सोहि प्रतियोगिताका क्रममा जोन्टीले उपाधी विजेता टोली सिवाइसी अत्तरियाको प्रशिक्षण समेत गराएका थिए।